Vaovao - Inona avy ireo teboka teknika amin'ny fanodinana faritra mekanika
Inona avy ireo teboka teknikan'ny fanodinana faritra mekanika
Alohan'ny fametahana ny marimaritra iraisana amin'ny faritra dia ilaina ny mahatakatra tsara ny fahalalana mifandraika amin'ny famolavolana mazava tsara ao amin'ny Shenzhen. Avy eo, inona avy ireo teboka ara-teknika amin'ny milina marina?
1. Manatsotra ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny masinina, ny fitsitsiana ny asa, ny fanapahana mekanika ary ny fanodinana ary manatsara ny famokarana asa.
2. Ny fitrohana feo, ny fitrohana ny hatairana, ny modulus nylon MC dia kely kokoa noho ny an'ny vy, mahatsapa fa lehibe ny atenuation, ary manome fomba tsara kokoa hisorohana ny tabataba noho ny vy.
3. mahazaka-mahatohitra, manalefaka tena, amin'ny tsy fisian'ny solika (na ny fanaleorana menaka), dia manome fahombiazana miasa tsara kokoa noho ny vy vy vy vita amin'ny alimo sy ny laminate fenôlika, mampihena ny fihinana ary mamonjy angovo.
4. Ny foibe CNC dia afaka mametraka faritra fanodinana fiantraikany rehefa mamorona fari-pahaizana teknika.
5. Tungsten vy fanjaitra fanjaitra nokarakarain'ny faritra mekanika dia manana famokarana avo sy hery fanodinana ary mahazaka enta-mavesatra lava.
6. Raha ampitahaina amin'ny vy, ny nilona MC dia ambany ny hamafiny ary tsy manimba ny faritra fitotoana izany.
7. Ny fiasan'ny fikarakarana ny fiantraikan'ny fanodinana faritra mekanika dia ho malefaka, azo avadika tsy misy fiovana, miampy ny faharetana ary ny fiverimberenana.
8. Fiorenana simika avo, alkaly, alikaola, etera, hydrocarbons, asidra malemy, menaka malama, detergents, rano (rano an-dranomasina), ary manana ny toetran'ny tsy misy fofona, misy poizina, tsy misy tsirony ary tsy misy harafesina, be mpampiasa amin'ny milina alkaly sy ny fanoherana ny harafesina , Fiarovana ny tontolo iainana, fanadiovana, sakafo, fanontana lamba ary fandokoana ary ny faritra sy ny singa hafa dia manome fepetra.